नेपालमा फेरी कोरोना संक्रमण फैलिने खतरा बढ्यो, सावधानी अपनाऔं (भिडियोसहित) - Health TV Online
कल्पना आचार्य 366 Views
यतिबेला नेपालमा फेरी एकपटक कोरोना संक्रमण फैलिन्छ की भन्ने जनमानसमा त्रास देखिन थालेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको दोस्रो वेभ तीब्र गतिमा फैलिरहेको सन्दर्भ र नेपालसँगको खुला सीमानाका कारण पनि नेपाल उच्च जोखिममा रहेको भनिएको छ । के नेपालमा फेरी संक्रमण दर बढिसकेको हो ? दोस्रो चरणको संक्रमणबाट जोगिन सरकारले के तयारी गरिरहेको छ ? भन्ने विषयमा हेल्थ टिभी अनलाइनले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा कृष्णप्रसाद पौडेलसँग गरेको कुराकानी :
भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिरहँदा नेपाल कत्तिको जोखिममा छ ?
भारतमा जब जब कोरोना संक्रमण फैलिन्छ तब तब हामीले पनि विशेष होशियारीका साथ तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको प्रमुख कारण भनेकै खुला सीमाना हो । हरेक दिन भारतबाट नेपालमा नेपालीहरुको आवतजावत हुन्छ त्यसले गर्दा पनि नेपाल संक्रमणको उच्च जोखिममा पर्ने गरेको छ । केही अघि संक्रमित कम भइसकेको भए पनि अहिले भारतमा संक्रमित बढ्ने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । विशेष गरी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, पञ्जाब लगायतका शहरहरुमा कोरोना संक्रमण अत्यधिक बढिरहेको छ । जुन शहरमा नेपालीहरु बढी छन्। अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा त्यहाँ रहेका नेपालीहरु कलेज र रोजगारका कार्यक्रम प्रभावित हुँदा घर फर्किन थालेका छन्। उनीहरु घर फर्किने बेला भाइरससँगै लिएर आउने सम्भावना बढेको छ र हामी जोखिममा परेका छौं । त्यसैले पनि भारतमा कोरोना बढ्दा नेपालमा पनि विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले नै नेपालमा संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भइसकेको हो र ?
होइन । अहिले नै संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भइसकेको छैन्। भारतबाट फर्किएका केही व्यक्तिहरुमा कोरोना पोजेटिभ भने देखिएको छ । उहाँहरुलाई हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । तर यसो भन्दैमा संक्रमण नबढ्ला भनेर भन्न सकिन्न। भारतबाट नेपाल भित्रिने वैधानिक र अवैधानिक थुप्रै बाटाहरु छन्। त्यसैले पनि हामीले होशियारी चाहिं अपनाउनैपर्छ । विशेष गरेर सुदूरपश्चिममा भारतबाट आउनेको संख्या बढी देखिएको छ । त्यसैले उक्त प्रदेश बढी जोखिममा छ । हामीले नाकाहरुमा निगरानी र परीक्षण गरे पनि अन्य बाटो हुँदै आउनेहरु हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्छन्। तर अहिले नै नेपालमा कोरोनाका संक्रमित बढिसके भन्ने चाहिं हैन्। तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ भन्ने हो । अर्को कुरा भारतमा डबल म्युटेन्ट भाइस भेटियो भन्ने कुरा पनि आएको छ । तर त्यही भाइरसले संक्रमण फैलायो भन्ने चाहिं पुष्टि भएको छैन्। भाइरसले रुप फेर्नु सामान्य हो । नेपालमा भने अहिलेसम्म उक्त भाइरस भेटिएको छैन्।
कोरोनाको दोस्रो वेभ आउन नदिन सरकारले के तयारी गरिरहेको छ ?
हामी भारतमा संक्रमण बढेदेखि नै उच्चस्तरीय छलफल र परामर्श गरिरहेका छौं । एक साताअघि मात्र हामीले एउटा निर्णय गरेर भारतबाट नेपाल भित्रिने सबै नाकाहरुमा कोरोनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र यदि कसैलाई पोजेटिभ आएमा सम्बन्धित निकायलाई भनेर व्यवस्थापन गर्ने साथै नेगेटिभ आए पनि १० दिन होम आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गर्ने भनिएको छ । जसअनुसार देशका सबै नाकाहरुमा यो परीक्षण र निगरानी गर्ने काम भइ नै रहेको छ । यसले हामीलाई कोरोना नियन्त्रण गर्न ठूलो मद्दत गर्छ भन्ने हो । योसँगै यसरी नाकामा आएलाई प्रति व्यक्ति १० वटा मास्क समेत दिएर पठाउने निर्णय भएको छ । यसो गर्दा कम्तीमा कुनै व्यक्तिलाई पोजेटिभ भए पनि उसले अर्को व्यक्तिलाई रोग सार्न नसकोस भन्ने हो । त्यसबाहेक नाकाहरुमा हेल्थ डेस्कलाई अझ सक्रिय बनाउने, परीक्षण र निगरानी बढाउने काम पनि भई नै रहेको छ । स्थानीय निकायमा रहेका क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनलाई पनि तयारी अवस्थामा राख्न भनिएको छ । उता मास्क पीपीई लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको कमी नहोस भन्नका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाले काम गरिरहेको छ । हामी सकेसम्म संक्रमण आउनै नदिन प्रवेशमै कडाइ गरिरहेका छौं भने संक्रमण आइहालेमा त्यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा पनि जुटिरहेका छौं ।
सर्वसाधारण त विना मास्क बाहिर हिंडिरहेका छन् त ?
हो, अहिले हामीलाई डर नै त्यसको छ । हामीले बारम्बार जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै मास्क लगाउन, दूरी कायम गर्न, भिडभाडमा नजान तथा साबुन पानीले हात धोइरहन भन्दै आइरहेका छौं । तर यसको पालना सबैले गरेको जस्तो लाग्दैन्। यो भनेकै आफू र आफनो परिवारलाई जोखिममा राख्नु हो । कोरोना संक्रमण एक व्यक्तिलाई भए पनि यसले सिंगो समाज र देशलाई नै असर गर्छ । त्यसैले मास्क नै नलगाएर हिड्नु भनेको आफनो र परिवारको ख्याल नगर्नु हो । जसले यस्तो गरिरहनु भएको छ कृपया यस्तो नगरिदिनुहोला । हामीले कोरोना संक्रमण कम भए पनि जोखिम कम नभएको कुरा बारम्बार विभिन्न माध्यमबाट भन्दै आइरहेका छौं । संक्रमण फैलाउने की रोक्ने भन्नेमा प्रत्येक व्यक्ति त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । त्यसैले संक्रमण रोक्ने काम सरकारले वा कुनै निकायले मात्र गरेर हुने होइन यसका लागि सबै जना लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तिममा कोरोना संक्रमणबाट बच्न के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
कोरोना संक्रमण नियनत्रण गर्ने भनेको तपाइँ हाम्रै हातमा छ । हामीले उचित तरिकाले मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र हातको सरसफाइमा ध्यान दिने काम बिर्सन भएन र यो नै कोरोनाबाट बच्ने ठूलो अस्त्र हो । त्यसपछि सकेसम्म भिडभाडमा नजाने , जोखिम हुने कामहरु नगर्ने जस्ता काम गरौं। भारतमा फेरी फैलिरहेको कोरोना संक्रमण अब नेपालमा नआउला भन्न सकिन । त्यसैले आफनो र परिवारको सुरक्षाका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न नबिर्सौं ।